लगानीकर्ता मालामाल हुने अर्को आइपीओ आउँदै — Imandarmedia.com
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २४ करोड बराबरको २४ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी ३० प्रतिशतले हुन आउने बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । ८० करोडको जम्मा ३० रकम २४ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
कम्पनीले २४ करोड बराबरका २४ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणको निमित्त निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बि.ओ.के.क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई विक्रि प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।
आज वि. ओ. केलाई शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक चयन गरेको हो । अब मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु समेत बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नै गर्ने भएको छ । यो आईपीओ निष्काशन पश्चात लगानीकर्ता मालामाल हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै आइतबार १२७ अंकले घटेको शेयर बजारमा सोमबार हरियाली आएको छ । सोमबार शेयर बजार मापक परिसूचक नेप्से १६१.९४ अंकले बढेको छ । आइतबार नकरात्मक सर्किटसमेत लागेको शेयर बजार सोमबार उत्साहप्रद रुपले बढेको हो । सोमबार नेप्से परिसूचक २९८०.७८ को बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३१.४१ अंकले बढेर ५५३.४० अंक पुगेको छ ।
यसै गरि साताकाे दाेश्राे काराेबार दिन साेमबार सेयर बजारमा हरियाली देखिएकाे छ । हरियाली बजारमा ४५ वटा कम्पनीकाे सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज (साेमबार) सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १६१.९४ अंकले बढेर २९८०.७८ विन्दुमा पुगेकाे छ । नेप्से ५.७४ प्रतिशतले बढेकाे हो । यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ३१.४१ अंकले बढेर ५५३.४० विन्दुमा पुगेकाे छ ।
कूल २२४ वटा कम्पनीकाे एक कराेड ७९ लाख २२ हजार ५ सय ८८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ९ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख २२ हजार ८ सय ७ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
स्टकका अनुसार काराेबार भएका १३ उपसमूहमध्ये सबै उपसमूहकाे सेयर बढेकाे छ । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक उपसमूह बढेकाे छ ।
साेमबार ४५ वटा कम्पनीकाे सेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ । ८ वटा कम्पनीकाे सेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले र ७ वटा कम्पनीकाे सेयरमूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेकाे छ ।
त्यसैगरी, साेमबार पनि धेरै काराेबार हुने कम्पनीहरूकाे अग्र स्थानमा अरूण भ्याली हाइड्राेपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी नै छ । कम्पनीकाे ४६ कराेड ३० लाख ९१ हजार ४ सय ५६ रूपैयाँ बराबरकाे काराेबार भएकाे हाे ।
हेर्नुस् साेमबारकाे सेयर तालिका :